Royal Caribbean waxay u timid soo dhaweyn diiran Grand Bahama | Wararka safarka Bahamas
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Bahamas » Royal Caribbean waxay u timid soo dhaweyn diiran Grand Bahama
Wararka safarka Bahamas • Wararka Caribbean • Warshadaha Maraakiibta • Warka Warshadaha Martigelinta • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka
Iyada oo si diiran loo soo bandhigay xafladaha Junkanoo iyo dabaaldegyo, saraakiisha dowladda iyo hoggaamiyeyaasha ganacsatada muhiimka ah waxay gacmo furan ku soo dhoweeyeen Royal Caribbean International markay ahayd Jimcihii, Juun 18, iyadoo Adventure of Seas ay dhameystirtay xafladdii ugu horreysay ee lagu daabacayo guriga Grand Bahama Island, oo ay la socdaan 1,000 rakaab ah oo xiisaynaya.
Grand Bahamas waxay aqbashay kaalinteeda ah halka ugu cusub ee hoyga loo tago ee Royal Caribbean International Adventure of Seas.
Ku soo noqoshada markab dalxiis ee Jasiiradda Grand Bahama ayaa soo noqotay ka dib muddo 16 bilood ah oo hakad uu ku jiray.
Kumanaanka Dalxiis ee Badaha Rakaabka ah ayaa la filayaa inay u ambabaxaan Grand Bahama saddexda bilood ee soo socda.
Ka dib muddo 16 bilood ah oo hakad la geliyay xayiraadaha socdaalka ee la xiriira COVID-19, ku soo noqoshada markabku jasiiradda Grand Bahama waxay astaan ​​u tahay daqiiqad muhiim u ah bulshada deegaanka. Waxay muujineysaa ballanqaadka dib-u-nooleynta ka dib caqabadaha dhaqaale ee ugu horreeyay ee ay soo bandhigtay saameynta xun ee duufaantii Dorian ka dibna ka sii dartay iyada oo ay xiran tahay masiibooyinka caalamiga ah. Freeport Harbor waxay ku faraxsan tahay inay u adeegto halka ugu cusub ee hoyga loo tago ee mas'uulka ka ah bixinta iyo shidaalka ka hor inta aan markabku ku laaban Nassau.
Isagoo ka hadlaya hadalada muhiimka ah ee xafladda caleema-saarka, Ra'iisul Wasaaraha, Mudane Hon. Dr. Hubert A. Minnis ayaa yiri, “16 bilood oo walaac ah, hubin la'aan, xirxirid iyo xaddidaadyo ah, dadka adduunka oo idil waxay u hamuun qabaan inay dibedda u dhiiradaan, soohdimaha cusub, ma aha oo keliya baxsad, laakiin Isagoo caafimaad. Grand Bahama runtii, waa mid aad loogu qancay inuu noqdo hoy bogsiin ah. Xeebaheeda, dhul ballaadhan oo deegaanka dabiiciga ah iyo dhaqankeeda hodanka ahi waxay caddeyn u noqon doonaan bogsashada kumanaan kun Qulqulatooyinka Badaha Rakaabka la filayo inay maraan Grand Bahama saddexda bilood ee soo socota. ”
“Waxaan aaminsanahay in mashruucan guri dejinta uu saameyn deg deg ah ku yeelan doono dib u soo laabashada dhaqaalaha Bahamian. Waxaan u mahadcelineynaa wadajirkayaga wadajirka ah ee Royal Caribbean xiriirka soo jireenka ah ee soo jiitamayay in ka badan 50 sano, ”ayuu yiri Hon. Dionisio D'Aguilar, Wasiirka Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas.
U dhawaanshaha Grand Bahama ee Koonfurta Florida waxay gacan ka geysaneysaa booskeeda dalxiis caan ah iyo dekedda loogu jecel yahay dalxiisyada Caribbean-ka ee dheer. Soo-booqdayaashu waxay ku raaxeysan karaan magaalada labaad ee ugu weyn waddanka, Freeport, oo ku faaneysa dalxiisyo heer sare ah, goobo dhaqan iyo taariikh taariikhi ah oo nolosha beddela, iyo sidoo kale cajaa'ibyada deegaanka. Laga soo bilaabo sahaminta cuntada, dalxiisyada taksi ee jasiiradaha qurxoon iyo dalxiisyada biyaha cad, biimayntu waa mid aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay rakaabka mar xeebta.
Qulqulatooyinka Badaha Waxaa laga soo saaray nasashooyinkeedii toddobada-habeenimo ee Nassau bishii Juun 12, oo soo bandhigtay laba maalmood oo gadaal-gadaal ah oo farxad leh Maalinta Wanaagsan ee CocoCay, dhiirrigelinta Cozumel iyo maalin buuxda oo laga furayo xeebta-ciid-cad ee Grand Bahama Sabti kasta xagaaga oo dhan. .
Kuwa riyo maalmeedka ku saabsan fasaxyadooda soo socda waxay tikidh ka dhigan karaan tikidhada xiisaha leh Qulqulatooyinka Badaha. Bixitaanka ugu dambeeya waxaa loo qorsheeyay Sebtember 11, 2021. Socdaalayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay soo booqdaan Bahamas.com/travelupdates muuqaalka guud ee nidaamka Bahamas ee safarkiisii ​​ugu dambeeyay iyo soo galitaankiisa kahor ballanta.
Bahamas oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo 16 goobood oo jasiirado u gaar ah, Bahamas waxay u jirtaa meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyadoo bixisa duulimaad fudud oo baxsad ah oo dadka safarka ah ka kaxeeya maalin kasta. Jasiiradaha The Bahamas waxay leeyihiin kalluumeysi heer caalami ah, quusid, doonyo iyo kumanaan mayl oo ah biyaha iyo xeebta ugu caansan dunida. Bahamas waxaa lagu yaqaan inay leeyihiin qaar ka mid ah biyaha ugu cad adduunka. Way cadahay in cirbixiyeenka NASA Scott Kelly uu la wadaagay daraasiin sawiro jasiiradaha ah intii uu ku wareegayay dhulka sanadkii 2016. Wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Bahamas ay tahay "meesha ugu qurxoon meelaha." Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan www.bahamas.com ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.